Home Wararka Al shabaab oo weerar xoogan ku qaaday ciidamada Galmudug ee degaanka Wisil
Al shabaab oo weerar xoogan ku qaaday ciidamada Galmudug ee degaanka Wisil
Sida ay sheegayaan wararka naga soo gaarayo degaanka Wisil, weerar ku bilawday gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ayaa ka dhacay Deegaanka Wisil ee Gobolka Mudug, qaraxa kadib waxaa la maqlay rasaas xooggan oo dhowr jiho ka dhacday sida Mustaqbal ay u sheegeen ilo deegaanka ah.
Waxaa la sheegayaa in weerarkaas uu ka dhashay Khasaare. Inta la xaqiijiyay waa dhimashada 5-ruux iyo dhaawaca tiro intaas ka badan balse waa uu ka badan karaa maadaama qaraxa uu xoogganaa oo meelo kala duwan oo deegaanka ka baxsan laga maqlay.
Dhanka kale, Al-Shabaab oo sheegatay mas’uuliyadda Weerarkaan waxa ay tilmaamtay in khasaaraha ay geysteen uu gaarsiisan yahay dhimashada 34-askari oo katirsan Ciidamada Xoogga Dalka gaar ahaan qaybta 21-aad. Saraakiil katirsan Ciidanka Xoogga Dalka ayaa sheegay in ay kahor tageen weerar Al-Shabaab la damacsaneed oo ay ka feejignaayeen maadaama ay la socdeen dhaq-dhaqaaqyada ay ka sameynayeen deegaanno katirsan Gobolka Mudug waa sida hadalka ay u dhigeen.